Ungasakha kanjani isu lakho lokuMaketha le-imeyili | Database lakamuva Lokuposa
Ikhaya » I-imeyili Database Blogs » imeyili Marketing » Ungasakha kanjani isu lakho lokuMaketha le-imeyili
Uma ufunda lokhu okuthunyelwe kungenxa yokuthi ufuna ngichaze ukuthi ngingakwenza kanjani ukumaketha nge-imeyili. Ufuna ukubona ukuthi ungakwenza kanjani uthole amakhasimende nemali engenayo kuhlu lwakho lwamakheli.
Kule ngxenye yeposi ngichaza kanjalo nje. Lonke ulwazi olusebenzayo oludingayo ukuze kusukela namuhla uqala ukusebenza ukumaketha kwakho kwe-imeyili.
Ukukubeka, ngihlukanise i-athikili yonke yaba izingxenye ezinkulu ze-4:
Dala isu lakho kusuka ekuqaleni.
Nqoba isithiyo se-SPAM
Vula ama-imeyili akho (okunzima kakhulu).
Khulisa uhlu lwakho lwababhalisile.
Futhi manje, yebo, sizokhipha ukuthi yikuphi ukukhangisa nge-imeyili ngempela.
# 1 Isu: ama-5Ws wokuthengisa nge-imeyili
Ukuchaza isu lakho udinga ukucacisa ngezinto ezithile:
Ukuphendula nje le mibuzo ye-5 uzoba nalo lonke ulwazi oludingayo ukukhulisa imephu yakho yomgwaqo.
I-1. Ngubani?: Chaza umfundi wakho ofanele
Lokhu kuhlala kuyisinyathelo sokuqala kunoma yiliphi isu lokukhangisa. Futhi ingabe lokho njengoba kudingeka sazi ukuthi sizokabani uma sibhala iposi, lapho sibhala i-imeyili nathi kudingeka wazi ukuthi ngubani iklayenti lethu elifanele.
Isizathu silula: uma ungazi ukuthi ubhalela bani imikhankaso yakho, awusoze wakwazi ukunikela ngokuqukethwe okulungile, bhala ama-imeyili amahle kakhulu wokuthengisa noma usungule ubudlelwane bokuthembana.
Kufanele uthole, yebo noma yebo, le mininingwane:
Idatha yemininingwane yabantu
Yini izifiso zakho nezinhloso zakho?
Lunjani usuku lwakho namuhla?
Yiziphi izinkinga zakho ezinkulu? Yini enye "ebuhlungu"?
Uhlu lwakho lwababhalisile kufanele luhlukaniswe ngokuya ngezintshisakalo ezahlukahlukene zezilaleli zakho . Leli phuzu kubalulekile ukuthi ulicabangele lapho wenza i-imeyili ngokwezifiso.
I-2. Kungani?: Chaza izinhloso zakho
Lapho uhlela isu lakho kufanele chaza izinhlobo zezinhloso ze-2:
Icacisiwe ku-imeyili ngayinye.
Isibonelo, ake sithi ufuna ukudala umkhankaso wokuthengisa i-ebook yakho entsha.
Kulokho udala okuthunyelwe lapho usondela khona kusihloko okuzovulelwa khona ukungasebenzi. Futhi kulelo posi ubeka ifomu elibangela i-autoresponder.
Yize umgomo wakho wokugcina ukuthengisa, imeyili ngayinye ngokulandelana izoba nomgomo ngamunye. Ngikunikeza isibonelo sokulandelana:
Imeyili ye-1: ukwethula wena nephrojekthi yakho. Injongo: ukukhiqiza ukwethembana.
Imeyili ye-2: xhuma kokuthunyelwe okuhlukile kwebhulogi yakho lapho ukhuluma khona futhi ngalesisihloko. Injongo: ukwengeza inani, ukukhulisa igunya lakho nokwakha isidingo somkhiqizo.
Imeyili ye-3: okuqukethwe okujulile ngokuhlobene ne-ebook yakho. Uma unazo, idatha nezibalo zisebenza kahle kakhulu. Injongo: thola igunya bese udala isidingo somkhiqizo.
Imeyili ye-4: Indaba yempumelelo kanye nesingeniso kumkhiqizo. Injongo: lungiselela umsebenzisi ukuthi athengiswe.
Imeyili ye-5: i-imeyili yokuthengisa. Injongo: thengisa.
Ukwazi izinhloso zamasu akho wokuthengisa nge-imeyili kufana ukuba nekhampasi ekuqondisa ukuthi uqhubeke usebenza.
I-3. Yini?: Uhlobo lokuqukethwe
Ngokuya ngezinhloso zomkhankaso wakho kanye ne-imeyili ethile ozoyithumela, uzokwakha uhlobo lokuqukethwe noma olunye. Ngikunika izibonelo zokuqukethwe.
Inhloso "yokwengeza inani": bona okuqukethwe okukhethekile kakhulu kunalokho okuloba kubhulogi lakho elivulekile. Isibonelo: uhlu lwamathuluzi akhethekile, amathiphu, amaqhinga, njll.
Injongo "ukukhiqiza ithrafikhi": lapha sizoba nephephandaba elijwayelekile lapho sichaza khona izindaba ze-blog. Unokuhlukahluka okubonile ngokulandelana kwama-imeyili ngaphambi kokubhekisela kokuthunyelwe okuthile okuthakazelisa umfundi.
"Igunya" lenhloso: ungathumela okuthunyelwe kwezivakashi okubhalile kumabhulogi we-influencers noma unikele ngezindaba zempumelelo ozitholile.
Injongo yokwakha ukwethembana: it kuhle ukuthi uzethule bese usho udaba lwakho kubafundi. Ngezikhathi ezithile futhi kuhle ukuthi ufake i-imeyili lapho utshela i-anecdote. Kumayelana nokubona umuntu ngemuva kwakho.
Kepha okokuqala kumele unake into eyodwa lapho uthatha isinqumo sokuthi uzotshela ini: kufanele kube okuqukethwe okusebenzayo nokusebenzayo.
Njalo cabanga ngokuthi ungamsiza kanjani umuntu othola ama-imeyili akho. Ukugxila kwakho # 1 kufanele kube yilokho okufunwa ngumfundi futhi akufunayo. Kujwayelekile ukuthola ama-blogi anokuqukethwe okuhle kakhulu, kepha lapho nje usubhalisa ulahlekelwa yilokho konke okuhle.
Abayeki ukuthumela okunikezwayo ngokulandelana futhi into ethakazelisa kakhulu abangakunika yona yincwadi yabo. Futhi ukungazisa uma othile eshicilele okuthunyelwe okusha nginamathuluzi anjengethi Okuphakelayo.
Uma kufanele banikele kuphela ukuthi ngiyabhalisa.
Ababhalisile bakho bangabantu ababaluleke kakhulu ebhizinisini lakho emva kwamakhasimende akho. Kufanele uwaphathe njengezimbambo eziyiqiniso.
I-4. Nini?: Imvamisa yokuthumela
The imvamisa yokuthumela akudingeki ifane kuyo yonke imikhankaso.
Ngenkathi i-newsletter ingathunyelwa kanye ngeviki, kunezinye izinhlobo zama-imeyili ezingaba nesinye isigqi. Bheka inkambo yami yamahhala ye-problogging.
← Yiziphi izinzuzo nobubi bokuthengisa ngama-imeyili?
Izinhlu Zokungena Kokubili →